Na eo aza ny fetra, ny cameras an'ny polisy dia mbola malaza | Vahaolana OMG
Na eo aza ny fetra, mbola misy malaza ny fakantsary amin'ny polisy
Ny fakan-tsary misy vatana dia misy ny fianjeran'izy ireo, tsy tsara daholo ary tonga lafatra. Ity fotodrafitrasa ity dia manana olana atrehiny sy olana nipoitra indrindra rehefa diso amin'ny fomba diso na ampiasaina amin'ny toe-javatra ratsy. Hitanisa ny sasany amin'ireto isika ary hitsara mafy raha, na dia misy tombony aza dia azo jerena ny fahalavoana? Ary inona no vokatr'io fetrany io?
Olana momba ny vola sy fitahirizana
Isaky ny tiantsika ny hanondro ny tsy fahampian'ny fandehanana an'ity fomba ity, ny olana roa tsy sahy ao an-tsaina dia ny vola sy ny habaka. Misy foana ny olana momba ny fomba sy aiza no hitehirizana ireo horonantsary ireo, na dia ny ilaina hampiofanana ireo mpandraharaha fiarovana momba ny fomba hanaovana izany aza. Azonao atao ny mividy fakantsary ho an'arivony dolara, tsy olana ity hetsika ity fa fitehirizana ny arisivana, fandaharam-potoana ary ny fandaharana mety mba ahafahana mivoaka mora mitady horonantsary rehefa ilaina. Lasa olana goavana amin'ny tranga maro izany. Na dia nilaza aza ireo polisy fa afaka manome vola bebe kokoa izy ireo izay mety handany amin'ny raharaha heloka bevava, ny fitehirizana ireo horonantsary vaventy be dia be amin'ny fanamby lehibe manaraka.
Amin'ny ambaratonga ankehitriny izay namolavola ny fakantsary vatana, ny fakantsary dia tsy mpita maso maso araka ny hitantsika ao amin'ny FSI. Ny FSI dia sombin-teknolojia iray izay afaka manaraka ny toerana anajeran'ny maso ary mampiasa blip hijerena ny kendrena raha jerena. Afaka manova mihetsika miaraka amin'ny maso ao amin'ny microseconds. Ny fakantsary vatana iray dia namboarina tamin'ny fomba toy izany; afaka mijery toerana iray ianao ary mbola tsy maka ny hetsika mitohy ao amin'io faritra io, azo atao ny tsy mahita ny hetsika mitranga eo anoloanao amin'ny fakan-tsary.
Amin'ny fampitahàna ny fakantsary kely kokoa amin'ny maso, tsy hain'ny sary fakantsary ny mamantatra sy manao zavatra mifanaraka amin'ny trauma ara-batana na ara-tsaina izay mety ho fivoaran'ny mpakafy azy. Izany dia mahatonga tsy hanitsy loatra amin'ny toe-javatra manokana. Ny maso dia afaka manivana ny sary velona tsy mbola voadona na mitranga manodidina raha mila olona haingana ny hivoahan'ny toe-javatra iray. Raha mampitaha ny mason'olona amin'ny fakan-tsary mifofofofoina dia latsaka be ao aoriana, rehefa mety atahorana hihorohoro ianao, ny atidohanao dia hampiseho ilay fandrahonana ho tonga akaiky sy hanakaikezana anao fotsiny mba hahafahanao manova toerana anao avy amin'io faritra manokana io. Ity trangan-javatra ity dia fantatra amin'ny hoe "mandrobona": ity dia fetran'ny fakan-tsary mifofofofo vatana, misintona fotsiny tsy misy fiovana sy fahaizana mifandraika amin'ny zava-mitranga. Ireo zavatra ireo dia mety hahatonga ny olona iray hamerina hijery ny haino aman-jery atsy ho atsy, hiatrika zava-tsarotra amin'ny fifandraisana amin'ny tranga mety ho nitranga. Izany anefa, dia lasa fitiliana lehibe amin'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana.
Ny toe-javatra mampidi-doza lehibe dia tsy voarakitra
Misy hetsika lehibe, antsoina hoe "cues tactile" izay tsy azo tratran'ny fakantsary. Andao atao hoe manapa-kevitra hisambotra olona iray ny manampahefana iray, saingy manandrana manohitra ny fampiasana ny hozatra ilay suspect. Zavatra tsy azo tratran'ny fakantsary izany fa rehefa misy ny toe-javatra toy izany. Matetika ny mpitandro filaminana dia voatery mampiasa hery fanampiny hisamborana. Rehefa jerena ireo horonantsary toa an'ireto dia hita foana fa toa ny mpitandro filaminana no mampiasa hery tsy ilaina hitondrana olona mampiahiahy. Tena diso tokoa ry zareo satria lasa tsy fahita firy ho an'ny fakan-tsary mihetsika amin'ny vatana, mety hiteraka olana lehibe izany amin'ny fanadihadiana.
Ny olana iray mety ho hita dia ny hoe; tsy tokony hiseho amin'ny fakantsary ny fahatsiarovana. Ny mpiandraikitra dia natao hanana traikefa amin'ny raharaham-pitsarana, ny olon-tsotra iray dia mety hahita toe-javatra ho avy raha toa kosa ny manamboninahitra iray mahita sy mahita ny loza mety hitranga. Tsy hita ao anaty fakantsary ireo fahatsiarovana na niainana ireo, hahatsapa ho toy ny hoe tsy nanao na inona na inona fotsiny ilay tompon'andraikitra. Azontsika atao ny manandrana misaintsaina toe-javatra iray izay misy olona mampiahiahy manangana ny tanany amin'ny fomba manokana, mety hahatsapa ny olon-tsotra iray fotsiny hoe hetsika ara-dalàna fotsiny na mety ho fihetsiketsehana, fa amin'ny maha-manampahefana ny lalàna manana traikefa be sy fampiofanana. Tadidinao avy hatrany ny zava-nitranga taloha na tadidinao ny fiofanana sy manao zavatra mifanaraka amin'izany.
Ny hafainganam-peo izay fakana sary fakan-tsary dia samy hafa ary hafainganam-pandeha lavitra noho ny fakan-tsary CCTV mahazatra ao amin'ny fivarotana na trano. Vokatry ny hafaingam-pandeha an-tsoratra, dia mety hitranga haingana ny hetsika sasany ka mety ho very an-tsorony sisa tavela. Ny olana toy izany dia mety hahatonga ny fahatelon'ny antsy na ny lezoka, izay mety ho lasa manan-danja amin'ny tranga fanadihadiana fa mety ho very amin'ity haingam-pandeha ity. Ny antony iray hafa tsy hita dia ny hetsika sy ny fihetsiky ny vatana. Ka na ny tompon'andraikitra iray nitifitra na hisorohana ilay fitifirana dia mety ho hita sy raisina am-bava izany fihetsika izany ary adika noho izany nahatonga olana.
Ny fahaizanà fakantsary ahitanao kokoa amin'ny sehatra maivana
Indraindray, rehefa mandeha ny fandraisam-peo no raisina, ny faritra maivana dia lasa hita maso izay mijery azy ireo, tsy hainy ny mahita na mahita izay tsy ho hitan'ny olona iray izay zara raha mahita amin'ny toe-javatra noheverina. Ny manamboninahitra iray dia mety nidina tao anaty tonelina iray niezaka nitalaho tamin'ny olona iray nieritreritra fa tsy ho sasatra izy. Mety niahiahy ilay tompon'andraikitra na zavatra izany fa basy izany ka mety handrebireby hitifitra. Ireo no toe-javatra mety mahatonga ny famakafakana lahatsary iray sarotra. Hita ihany koa fa tsy azo itokisana amin'ny jiro fotsiny ny fakan-tsary, afaka mandeha avy mamirapiratra izy ireo ao anatin'ny segondra manala ireo valin-teny tena ilaina.
Ireto misy fetra hafa dia:
Fampaherezana ny vinavina faharoa raha ny toe-javatra manokana dia tsy hita tsara na takatry ny sainy, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mety lavitra ny tena toe-javatra izy ireo
Ny fakantsary tokana iray dia mety tsy ho ampy hanatanterahana izay takiana
Ny fakantsary dia afaka mirakitra refy 2 ihany
Indraindray ny vatanao dia mety manakana ny fomba fijery lehibe
Na eo aza ny fetra, mbola misy malaza ny fakantsary amin'ny polisy no farany niova: Oktobra 10th, 2019 by Admin
2533 Total Views 13 Views Today
Famerana amin'ny fakantsary raikitra an'ny polisy
Tombontsoa ho an'ny fakantsary raikitra an'ny polisy
Orinasa fiarovana - Ahoana ny fiantraikan'ny fakantsary fatin'ny polisy